So apam foforo no yɛ nnipakuw 144000 pɛ? – 4Jehovah (Yehowa)
Posted in Nsԑmmisa ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Ɔsԑmpaka
Gyidi nsɛmti ahorow nyinaa a obi betumi ne Yehowa Adansefo besusuw ho no, biribiara nni ho a ɛsom bo kyɛn Yesu Kristo Nipa ko a ɔyɛ ne nkwagye ne daa nkwa ho nsɛm nsɛm. Yehowa Adansefo wɔ nkwagye akuw abien nhyehyɛe a ɛno mu na woakyekyɛ wɔn akyidifo mu akuw abien. Wɔfrɛ akuw a edi kan “nguankuw ketewa” a wɔyɛ nnipa dodow 144000 na afei kuw a ɛto so abien no wɔfrɛ no “nnipakuw kɛse” wɔyɛ adessama dodow a aka nyinaa. Saa wohwehwɛ nea wɔgye di fa akuw abien nkwagye nhyehyɛe mu a, ɛbɛda adi sɛ mfomso kɛse wɔ Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛm efisɛ Kyerɛwnsɛm nkyekyem biako mpo mfoa wɔn adwene soronko a ɛfa asɛm yi ho.Yehowa Adansefo gye di sɛ hokwan nyinaa a ɛwɔ Apam Foforo no mu yɛ kuw a edi kan a ɛyɛ nnipa 144000 no dea. Wɔka sɛ akyidifo dodow no a ɛwɔ kuw a edi kan yi (kakra bi nni hokwan) wɔpaw wɔn fii Pentekose 33 Y.B kosii afe 1935 1. Apam Foforo no hokwan yɛ nnipakuw 144000 yi dea, ebi ne awo foforo, honhom mu abayɛ kɔka Onyankopɔn mma abusua ho, hokwan a etumi ma wɔbɛn Yesu ankasa wɔ wɔne Onyankopɔn Ntamgyinafo, tumi a ɛma wodi Awurade Anwummere Aduan no bi ne owusɔre kɔ Ɔsoro asetram ho anidaso.
Esiane sɛ nnɛ Yehowa Adansefo kɛse no anya nkyerɛkyerɛ sɛ wɔnnka nnipakuw 144000 yi ho nti, wɔn pii no hu wɔnho sɛ wɔyɛ ekuw abien, nnipakuw kɛse mufo. Wɔnnye nni sɛ Apam Foforo no hokwan fa wɔnho, Mmom no, wɔaka akyerɛɛ wɔn sɛ Yesu Kristo Ntamgyinafo abusuabɔ no a ɛda ɔne ne 144000 ntam abue mfaso abien nkutoo ama wɔn, te sɛ bɔne fafiri, ne hokwan a wɔwɔ kɔ Onyankopɔn anim wɔ mpaebɔ mu. Enti, nnipa dodow kɛse a wɔwɔ kuw abien yi mu ani sɔ owusɔre a ɛkɔ asase so asetram wɔ Yesu Kristo ne Ne 144000”nguankuw ketewa” nniso ase sɛ honhom fam kyɛfa a ɛkyɛn so a wɔn nsa betumi akᾱ.
Obi betumi ahu no ntɛmntɛm sɛnea nkwagye a ɛnam kuw abien nhyehyɛe tumi ma Yehowa Adansefo bebree mfa Apam Foforo no bɔhyɛ a ɛwɔ Bible mu no nnyɛ hwee. Eyi de nsɛnnennen kɛse ba efisɛ Bible no ka pefee sɛ saa obi twe neho fi Apam Foforo no ho a, ɔtwe neho fi daa nkwa ho afei ɔde neho kamee Kristo mogya a ohwie guu ma bɔne fafiri mu ɔgye. Nsɛmmisa ne nkyekyem ahorow a edidi so wɔ ase ha no a obiako bebisa betumi ama Yehowa Danseni ahu no ntɛmntɛm sɛnea wɔn honhom fam adwene a ɛfa akuw abien nkwagye nhyehyɛe no yɛ asɛnkɛse.
NSԐMMISA 15 WOBEBISA YEHOWA ADANSEFO FA NNIPAKUW 144000 HO
1.“Ԑhe na ɛwɔ wɔ Bible mu a ɛka sɛ nnipa 144000 no NKUTOO na ɛwɔ Ɔsoro?
Adiyisɛm 7:3-8 ne Adiyisɛm 14:1-5 yɛ akenkan abien NKUTOO na ɛwɔ Bible mu a ɛka nnipa 144000 ho asɛm. Bere a Adiyisɛm 14:3 kyerɛkyerɛ 144000 no mu sɛ wogyinagyina Onyankopɔn ahengua anim wɔ Ɔsoro no, ɛyɛ den ma Yehowa Adansefo sɛ wobetumi akyerɛ sɛ nkyekyem yi ka sɛ kuw 144000 NKUTOO ne nnipakuw a ɛwɔ ɔsoro, efisɛ Bible no NNKA saa. Ԑdenam asɛmmisa a ɛwɔ atifi ho a wobebisa no wobɛboa wɔn ama woahu sɛnea Ɔwɛn Aban ahyehyɛ ɔsom nkyerɛkyerɛ a ENNI Kyerɛwnsɛm mu nnyinaso! Ama woasi adwene yi so dua no, saa Yehowa Adansefo fa nkyekyem yi ne Kyerɛwnsɛm afoforo bɔ mmɔden de foa wɔn gyidi a ɛfa akuw abien nkwagye nhyehyɛe so a, wɔde kɔso bisa wɔn atifi hɔ asɛmmisa no. Nhwɛso foforo a wɔde ama a edidi so wɔ ase ha no bɛboa wo ama woanyi wɔn akyinnyegye ano:
AKYINNYEGYE 1: Ebia Yehowa Adansefo bɛgye kyim sɛ 144000 na ɛwɔ ɔsoro hokwan efisɛ saa Kristofo nyinaa bɛkɔ ɔsoro a, nnipa biara renka wɔ asase so a ɔsorofo no bedi wɔn so wɔ Paradise asase a ɛbabam wɔ Kristo afe apem ahenni nniso ase. Wɔ Akyinnyegye yi ho mmuae no, bisa tiawa sɛ:
Wonnye nni sɛ nnipa bi bɛtra asase so wɔ Onyankopɔn Harmagedon Akōdi no? Dɛn nti na Kristofo a woanya owusɔre ntumi nni wɔn so? Esiane sɛ saafo no bɛkɔ so awo mma anya awo ntotoaso wɔ asase foforo no so nti, wonsusuw sɛ nnipa pii bɛtra asase so a Kristofo bedi wɔn so wɔ Kristo ahenni nniso ase a ɛnyɛ nnipa 144000 nkutoo?
Yehowa Adansefo kɛse no behu sɛ aba wom na woagye atom sɛ wɔn a wɔbɛtra asase so wɔ Harmagedon sɛe akyi bɛdɔɔso ama Kristofo adi wɔn so fi soro. Nanso, sɛ wɔgye tom anaasɛ wɔrennye ntom no wode kɔso da Kyerɛwnsɛm adwene adi denam asɛmmisa yi a wobebisa bio: “Ԑhe na ɛwɔ wɔ Bible mu a ɛka sɛ nnipa 144000 no NKUTOO na ɛwɔ ɔsoro?
AKYINNYEGYE 2: Ebia wɔbɛfa asɛm ɛwɔ Yohane 3:13 a ɛka sɛ: Bio nso, onipa biara nnkɔɔ ɔsoro na mmom nea woasian afi ɔsoro, Onipa Ba no. Wɔde eyi bɔ mmɔden de kyerɛ sɛ esiane sɛ onipa biara nnkɔɔ ɔsoro pɛn ansa Yesu Kristo rekɔ nti, Ɔsoro nnyɛ Adessama kɛse no atraae. Eyi yɛ akyinnyegye a anoyi nnyɛ den efisɛ Yesu ne obi a otuae bɔne so ka ama adessama atumi atraa wɔ Onyankopɔn anim hɔ (ɔsoro). Eyi nti na nnipa biara ankɔ Ɔsoro ansa Yesu kɔe. 2. Enti, nkyekyem yi mfoa so sɛ nnipa 144000 nkutoo ne nnipa ɛwɔ ɔsoro na mpo ɛnkyerɛ sɛ ɔsoro nyɛ beae a wɔhyehyɛe sɛ nnipa bɛtra wɔ owuo akyi. Kae wɔn sɛ Yesu kae sɛ ɔbɛkɔ akosiesie baabi wɔ ɔsoro ama N’akyidifo (Yohane 14:2-3). Bio nso, wobetumi abisa sɛ “Ԑhe na ɛwɔ wɔ Bible mu a ɛka sɛ nnipa 144000 no NKUTOO na ɛwɔ ɔsoro?
AKYINNYEGYE 3: Ebia wɔbɛgye kyim sɛ esiane sɛ Onyankopɔn bɔe asase maa atreneefo sɛ wɔtena so afebɔɔ” (Nnwom 37:29) nti, Ɔbɔe sɛ nnipa ntena so afebɔɔ wɔ wɔn wusɔre nipaduam akyi. Ebia wobebisa wo sɛ dɛn nti na Onyankopɔn bɛbɔ ɔsoro foforo ne asase foforo sɛ ɛnyɛ atreneefo fie (2 Petro 3:13) saa ɔpɛ sɛ Kristofo nyinaa bɛtena ne nkyɛn wɔ ɔsoro mmom a. Ama woabua akyinnyegye yi, wode ka biribi a ɛte sɛ eyi tiawa:
“Ԑhe na Nnwom 37:29 ka sɛ atreneefo no a wobɛtra asase no so yɛ awufo a woanya owusɔre? Dɛn nti na nkurɔfo yi nnyɛ nnipa a wowui wɔ asase so asetena afebɔɔ denam wɔn awo ntotoasofo a wɔbɛkɔ so atena asase so wɔ wɔn wu akyi?
“Bio nso, Ԑhe na ɛwɔ wɔ Bible mu a ɛka sɛ wɔn a wonya wusɔre kɔ ɔsoro foforo ne asase foforo renni aforosian? Esiane sɛ Yesu tumi dii ɔsoro ne asase aforosian wɔ ne wusɔre nipaduam nti (Asomafo Nnwuma 1:11) dɛn nti na atreneefo eyinom a woanya owusɔre ntumi ntena ɔsoro ne asase so saa wotumi di ɔsoro ne asase so aforosian a? Bio nso, ɛhe na Bible no ka sɛ nnipa 144000 NKUTOO na ɛwɔ ɔsoro kɔ hokwan?
Bere a wobua wɔn akyinnyegye mmiako mmiako sɛnea ɛwɔ (atifi hɔ no) na wokɔ so haw wɔn sɛ wɔnkyerɛ nkyekyem a ɛfoa Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛ titiriw yi a ɛfa nnipa 144000 ho no so a, Yehowa Adansefo no mpɛn pii no ani bere, Ebia wɔbɛka akyerɛ wo sɛ ma wonhu adanse ɛkyerɛ sɛ nnipa a ɛboro 144000 na ɛwɔ ɔsoro. Asɛmmisa a ɛtoa so no bɛma ada adi sɛnea mpanyimfo 24 no yɛ akuw foforo a ɛwɔ ɔsoro a wɔka nnipa 144000 no ho. Eyi akyi no wobetumi abisa nsɛmmisa ahorow (Hwɛ ase ha) a ɛbɛkyerɛ sɛ nnipakuw kɛse no a ɛwɔ Adiyisɛm 7 ne Adiyisɛm 19 nso wɔ ɔsoro. Nsɛmmisa yi bɛbɔ Yehowa Adansefo adwene a wokura fa nnipakuw kɛse no a wɔyɛ nnipakuw a wobenyan wɔn aba asase so asetena nkutoo agu.
2. Wɔ Adiyisɛm 14:3, yɛkenkan sɛ nnipakuw 144000 no to dwom foforo bi wɔ…”mpanyimfo no anim”. Yɛkenkan nso sɛ mpanyimfo 24 no wɔ ɔsoro wɔ Adiyisɛm 4:4, 10-11, 5:8-10, 14:16 ne 19:4. So nokwasɛm sɛ nnipa 144000 too dwom foforo bi “wɔ mpanyimfo 24 no anim kyerɛ sɛ mpanyimfo 24 no yɛ nnipakuw soronko a wɔn nso wɔka nnipa 144000 ho wɔ ɔsoro? Bio nso, wobetumi akyerɛ me Bible nkyekyem biako a ɛka sɛ nnipa 144000 NKUTOO na ɛwɔ ɔsoro?
“Na wɔreto dwom foforo wɔ ahengua no anim ne abɔde ateasefo baanan ne mpanyimfo no anim, na obiara antumi ansua saa dwom no na mmom mpem ɔha aduanan anan a wɔato wɔn afi asase so”-Adiyisɛm 14:3 3.
3. Wɔ Adiyisɛm 7:9-15, yɛkenkan fa nnipakuw kɛse a onipa biara antumi anka wɔn na wɔyɛ nnipa wofii ɔman biara mu. Bere a mpanyimfo 24 no wɔ nkyekyem 13 bisae sɛ ɛhe na nnipakuw yi fi bae no, mmuae no a ɛwɔ nkyekyem 14-15 ka sɛ nnipa yi fii “ahohiahia kɛse” no mu na wogyina Onyankopɔn ahengua no anim, na wɔresom No awia ne anadwo wɔ N’asɔredan mu. Sɛnea Adiyisɛm 11:19 kyerɛ no, so Onyankopɔn asɔredan yi beae wɔ Ɔsoro anaasɛ Asase so?
“Na Onyankopɔn asɔredan a ɛwɔ ɔsoro no buee na wohui Apam adaka no wɔ N’asɔredan no mu”-Adiyisɛm 11:19.
Ebia Yehowa Adansefo bɛbɔ mmɔden sɛ wɔbɛgye kyim sɛ asɔredan a ɛwɔ Adiyisɛm 7:15 ka fa asɔredan no ntrɛmu a ɛwɔ asase so. Wɔ saa kwan yi so ebia wɔbɛgye kyim sɛ “nnipakuw kɛse “ no resom wɔ asɔredan no ntrɛmu a ɛyɛ asase so. Ama woabua akyinnyegye yi twe adwene si Hela asɛmfua “hi-e-ron” a ɛkyerɛ asɔredan a ne ntrɛmu wɔ asase so no NNYԐ saa asɛmfua no na wɔde dii dwuma wɔ akenkan yi mu. Mmom no, Hela asɛmfua “na-os” ɛnna wɔde dii dwuma wɔ Adiyisɛm 7:15. 4. Enti Nnipakuw kɛse yi resom wɔ asɔredan no mfinimfini a ɛyɛ Onyankopɔn asɔredan a ɛwɔ ɔsoro na ɛnyɛ asɔredan no ntrɛmu a ɛyɛ asase so.
4. Wɔ Adiyisɛm 7:16 yɛkenkan sɛ nnipakuw kɛse no “… ɔkɔm renne wɔn bio na mpo sukɔm renne wɔn na kapɛsɛ owia ahye wɔ afei ɔhyew biara rennka wɔn”. Esiane sɛ ɔkɔm, sukɔm ne owia ano hyew kyerɛɛ asase so tebea nti, ɛbɛyɛ dɛn na nnipakuw kɛse atraa asase so a wonhu tebea a ɛte saa? Nkyerɛkyerɛmu yi a ɛfa beae a “nnipakuw kɛse” yi wɔ kyerɛ sɛ wɔwɔ ɔsoro, sɛ anka ɛbɛyɛ asase so?
5. So Adiyisɛm 19:1 ka sɛ “nnipakuw kɛse” no wɔ ɔsoro anaasɛ asase so?
“Eyinom akyi metee nea ɛte sɛ nne denneennen a ɛyɛ nnipakuw kɛse wɔ ɔsoro. Wɔkae sɛ: Kamfo Yah Mo nkurɔfo! Nkwagye no ne anuonyam no ne tumi yɛ yɛn Nyankopɔn dea”-Adiyisɛm 19:1.
Yehowa Adansefo ebia wɔbɛbɔ mmɔden agye akyinnye sɛ “nnipakuw kɛse” no a wɔkae wɔnho asɛm wɔ Adiyisɛm 19 nyɛ “nnipakuw kɛse” koro no ara a ɛwɔ Adiyisɛm 7. Anaasɛ ebia wɔbɛka sɛ “nnipakuw kɛse” a ɛwɔ Adiyisɛm 9 yi yɛ Abɔfodɔm na ɛnyɛ nnipa. Saa wɔka eyi a, bua no tiawa denam nsɛmmisa a edidi so a wobebisa:
Saa nnipakuw kɛse yi a ɛwɔ Adiyisɛm 19:1 yɛ abɔfo a, dɛn nti na wɔreto Onyankopɔn nkwagye dwom? Abɔfo nnyɛ bɔne da nti wonhia sɛ wobɛgye wɔ nkwa, wohia a? Bio nso, wobetumi akyerɛ me Bible nkyekyem biako a ɛka sɛ nnipa 144000 NKUTOO na ɛwɔ soro?
Denam ntease yi no, Yehowa Adansefo fᾱ kɛse no nni hwee a wɔbɛka na mpɛn pii no wobetwa nkɔmmɔbɔ no so efisɛ woantumi ankyerɛ wɔn gyidi a ɛfa nnipa 144000 no ho amfi Bible mu. Ԑha na wobetumi adan nkyerɛkyerɛmu no de akowie sɛnea Ɔwɛn Aban no ka sɛ 144000 no nkutoo ne nnipa ɛwɔ Apam foforo no mu kᾱ wɔn nkwagye titiriw.
6. So wobu woho sɛ wɔyɛ Apam Foforo nhyehyɛe no mufo? Yiw, anaasɛ Dabi, Na dɛn ntia?
“…. 144000 no nkutoo … na woadi Yesu nkaedi no bi wɔ ɔkwan a ɛfata so wɔ Awurade Wuo Nkaedi Afahyɛ no ase, afei nso wɔn nkutoo na Yesu ne wɔn yɛe N’apam…. wɔn a wɔyɛ “nnipakuw kɛse” no mufo nni kyɛfa wɔ apam foforo no mu’-Ɔwɛn Aban February1, 1998, kr. 19
DԐN NA YEHOWA ADANSEFO GYE DI … nguankuw ketewa 144000 no nkutoo na wɔkɔ ɔsoro ne Kristo di hene … 144000 no na wɔawo wɔn foforo sɛ Onyankopɔn honhom mma…Apam Foforo yɛ honhom fam Yesrael nhyehyɛe…” YEHOWA ADANSEFO Wɔyɛ Henanom? Dɛn Na Wogye Di? 2000, kr. 13
“Wɔ anadwo a ɔrewu no … bere a ɔde Awurade Anwummere aduan afahyɛ no asi hɔ no, Yesu Kristo paemu kae apam foforo a ebewie mū di denam N’afɔrebɔ so…Apam Foforo no afanu no yɛ Yehowa a ɔwɔ afᾱ ne Nyankopɔn Yesrael, wɔn a honhom awo wɔn wɔ Kristo mu na wɔyɛ ne nipadua asafo nso wɔ afᾱ… Bere a Onyankopɔn bɛpaw obi ama ɔsoro frɛ (Hebrifo 3:11), Onyankopɔn de onii no ba N’apam mu esiane Kristo afɔrebɔ…Yesu Kristo yɛ Apam Foforo no Ntamgyinafo”-Insight on The Scriptures, po 1, 1988, kr. 524
“Yesu Kristo nnyɛ Onyankopɔn ne adessama nyinaa ntamgyinafo. Ɔyɛ ɔne ɔsoro Agya Yehowa Nyankopɔn ne honhom fam Ɔman Yesrael Ntamgyinafo a wɔyɛ nnipa dodow 144000 nkutoo”–Worldwide Security Under the Prince of Peace”, 1986, kr. 10
Sɛnea atifi hɔ nsɛm a yɛafa afi Ɔwɛn Aban nhoma mu akᾱ ama ada adi pefee no, Yehowa Danseni biara ommu neho sɛ Ɔyɛ 144000 mufo no efisɛ wɔakyerɛkyerɛ no sɛ onyi neho mfi Apam foforo no mu. Enti, Yehowa Adansefo dodow kɛse no a wohyia no bebua wo asɛmmisa sɛ “Dabi” efisɛ wɔnnye nni sɛ wɔka 144000 kuw no ho.
7. Ԑhe na ɛka wɔ Bible mu sɛ 144000 NKUTOO na wɔyɛ nnipa ɛwɔ Apam foforo no mu?
Sɛnea ɛwɔ ɛfᾱ nsɛmmisa yɛde bisa Yehowa Adansefo sɛ wɔnkyerɛ baabi a Bible no ka sɛ nnipa 144000 NKUTOO na ɛwɔ ɔsoro, nanso wɔrentumi nkyerɛ Bible nkyekyem biako mpo a ɛka sɛ Apam Foforo yɛ Nnipa 144000 NKUTOO na ɛwɔ hokwan. Wɔbɛkyerɛ wo nkyekyem a ɛkyerɛ sɛ Apam foforo yɛ honhom fam Yesrael (Yeremia 31:13, Hebrifo 8:8, 10) afei nso wɔbɛbɔ mmɔden sɛ wɔde nnipa 144000 dodow no bɛtoto Apam Foforo no ho denam Adiyisɛm 7:1-8 ne Adiyisɛm 14:1-5 nsɛm so. Nanso, nkyekyem ahorow yi nka sɛ Apam foforo hokwan no yɛ nnipa 144000 pɛ. Nokwarem no, nnipa 144000 a Adiyisɛm 7:3-4 kae sɛ wɔasɔ wɔn dodow ano fii ase wɔ ahohiahia kɛse no mfinimfini na ama wɔabɔ nnipa 144000 ho ban afi ɔhaw a ɛbɛba asase so (hwɛ Adiyisɛm 7:1-3) Esiane sɛ Ahohiahia no nnya mfii ase nti, saa ara na nnipa 144000 ano a wɔasɔ no nnya nhyɛɛ ase ɛ! Ԑyɛ nokware pefee sɛ ntumi nyɛ wɔn a wɔwɔ Apam Foforo no mu ano na wɔresɔ efisɛ ɛno hyɛɛ ase fii Yesu Kristo wuo ne ne wusɔre bere so, na afei Adiyisɛm 7 anaasɛ 14 anka Apam Foforo ho asɛm biara. Enti, Yehowa Adansefo a wohyia rentumi nnya Bible nkyekyem baako mpo mfoa wɔn adwene sɛ nnipa 144000 NKUTOO na wɔapaw wɔn kɔ Apam Foforo no mu.
8. Sɛnea 1 Yohane 5:1 kyerɛ no, nnipa dodow ahe na “Onyankopɔn awo wɔn”?
“Obiara a ɔgye di sɛ Yesu ne Kristo no Onyankopɔn awo no afei nso obiara ɔdɔ onii a ɔmaa wɔwoo no dɔ ɔno a wɔwoo no fi onii no”.
9. Esiane sɛ Awo foforo akwanhwɛ yɛ ahwehwɛde titiriw ansa obi anya Apam Foforo no bi afei esiane sɛ “obiara tumi nya Onyankopɔn awo” sɛ honhom mma nti, so eyi kyerɛ sɛ Apam Foforo hokwan abue ama wɔn a wogye Yesu Kristo di NYINAA, a ɛnyɛ nguankuw 144000 pɛ na woapaw? Dɛn na Yesu Kristo kae sɛ ɛsɛ obi nya ama “woahu” Onyankopɔn Ahenni?
“Yesu buae see no sɛ: Nokware paa mika akyerɛ wo, “Gye sɛ wɔwo obi foforo, ontumi nhu Onyankopɔn Ahenni no… Nea ɔhonam awo no yɛ ɔhonam na afei nea honhom awo no yɛ honhom. Mommma ɛnyɛ mo nwonwa efisɛ maka akyerɛ mo, Mo nkurɔfo ɛsɛ sɛ wɔwo mo foforo”-Yohane 3:3, 6-7.
10. Sɛnea Romafo 8:14 kyerɛ no, Onyankopɔn honhom betumi akyerɛ onipa bi kwan wɔ bere a wɔmfaa no sɛ Onyankopɔn ba?
“Efisɛ wɔn nyinaa a Onyankopɔn honhom kyerɛ wɔn kwan no, eyinom ne Onyankopɔn mma. Efisɛ Moannya honhom a ɛyɛ nkoasom a ɛde suro ba bio, mmom moanya honhom a woafa mo sɛ mma, denam honhom yi so na yɛteɛm “Abba, Agya! Na honhom no ankasa ne yɛn nso honhom di adanse sɛ yɛyɛ Onyankopɔn mma”-Romafo 8:14-16
11. Esiane sɛ honhom awo a ɛde kɔ Onyankopɔn abusua mu yɛ ahwehwɛde titiriw ama Onyankopɔn honhom akyerɛ yɛn kwan nti, obi a onni Kristo honhom betumi ayɛ No (KRISTO) dea? Ԑbɛyɛ dɛn na woasɔ Onyankopɔn ani, saa Onyankopɔn honhom atena wo mu a (Romafo 8:8-9)?
“Enti wɔn a wɔte wɔ ɔhonam ntumi nsɔ Onyankopɔn ani. Nanso, monnte wɔ ɔhonam na mmom honhom mu , saa Onyankopɔn honhom ankasa te mo mu a. Nanso, saa obi nni Kristo honhom a onii no nyɛ Kristo dea” -Romafo 8:8-9
12. So biribi wɔ nkyekyem ahorow yi mu a ɛka sɛ Apam Foforo hokwan a ɛyɛ “awo foforo” ne honhom mu abayɛ yɛ nnipa 144000 nkutoo dea? Dɛn na Yesu kae sɛ ɛsɛ sɛ obi nya mu kyɛfa ama woanya daa nkwa?
“Saa pɛpɛɛpɛ na Yesu kae kyerɛ wɔn: Nokware mika akyerɛ mo, Gye sɛ modi Onipa Ba no honam na monom ne mogya, monni nkwa wɔ mo mu. Onii a odi me honam na ɔnom me mogya no wɔ daa nkwa, na mɛsɔre no wɔ da edi awiei no”-Yohane 6:53-54
13. Esiane sɛ 1 Timoteo 2:5 ne Yohane 14:6 ka sɛ Yesu ne yɛ Onyankopɔn ne nnipa ntamgyinafo no, na afei ɔno nkutoo ne obi a ɛsɛ sɛ yɛnam ne so kɔ Onyankopɔn nkyɛn a, ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na woanya nkwagye ne bɔne fafiri saa wogye Ɔwɛn Aban nkyerɛkyerɛ sɛ Yesu NNYԐ wo Ntamgyinafo toom a?
“Yesu Kristo nnyɛ Onyankopɔn ne adessama nyinaa ntamgyinafo. Ɔyɛ ɔne ɔsoro Agya Yehowa Nyankopɔn ne honhom fam Ɔman Yesrael Ntamgyinafo a wɔyɛ nnipa dodow 144000 nkutoo” –Worldwide Security Under the Prince of Peace”, 1986, kr. 10
Dwinnwen asɛnnibea a woredi aɛm bi ho, na mmaranimfo ka ho … Ԑwom sɛ wonni asɛnnibea a ɛte saa, nti wɔ saa kwan yi so no ɔnyɛ wo mmaranimfo somfo. Nnipa ɛwɔ amanaman nyinaa no … nya Yesu dwumadi so mfaso mprempren mpo. Mmom ɔnyɛ asɛnnibea Ntamgyinafo, efisɛ wɔnni apam foforo no mu, ɔyɛ wɔn kwan a wɔnam so kɔ Yehowa Nyankopɔn nkyɛn” -Ɔwɛn Aban August 15, 1989, kr. 31.
14. Ԑhe na ɛwɔ wɔ Bible mu a ɛka sɛ wonni “asɛnnibea” a wone Yehowa Nyankopɔn anya asɛm efisɛ wo bɔne ho asotwe hia sɛ wɔde firi wo? Ԑbɛyɛ dɛn na Yesu ayɛ wo ɔkwan a wonam so kɔ Yehow nkyɛn saa Yesu nyɛ wo bɔne ho nsɛm akyɛwpa? Bio nso, ɛhe na ɛwɔ wɔ Bible mu a ɛka sɛ Apam Foforo no ne Yesu Ntamgyinafo dwumadi hokwan yɛ nnipa 144000?
“Efisɛ Onyankopɔn biako na yɛwɔ ne Onyankopɔn ne nnipa ntamgyinafo biako onipa, Yesu Kristo, nea ɔde neho mae sɛ yɛn nyinaa agyede a ɛsɛ …”-1 Timoteo 2:5-6
“Yesu ka kyerɛɛ no sɛ, Mene ɔkwan no ne nokware no ne nkwa no, Obiara mma Agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so”-Yohane 14:6
15. So woaba Yesu nkyɛn tēē denam wo bɔne fafiri ne daa nkwa akyɛde a wobebisa no sɛ ɔfa mma wo?
“Biribiara Agya no de ma me bɛba me nkyɛn, na nea ɔba me nkyɛn no merempam no ɔkwan biara so… Onipa biara ntumi mma me nkyɛn gye sɛ Agya no a ɔsomaa me twe no, na menyan no wɔ da edi awiei”-Yohane 6:37, 44
“Me nguan tie me nne, na minim wɔn na wodi m’akyi. Na mɛma wɔn daa nkwa na worensɛe ɔkwan biara so, na obiara renhwim wɔn mfi me nsam”-Yohane 10:27-28
1. Hwɛ Ɔwɛn Aban January1, 1997, kr. 10
2. Yehowa Adansefo nnye nni sɛ ɔkra no anaasɛ obi honhom kɔso tra ase wɔ honamdua owuo mu, enti wɔnnye nni sɛ obiara tumi trae ase sɛ honhom wɔ ɔsoro ansa wobenya owusɔre a wɔgye di sɛ efii ase wɔ afe 1914 ma wɔn a wɔyɛ 144000 no mufo a wawu. Enti, wɔnnye nea Kristofo ɛfᾱ kɛse no gye di fa Apam Dedaw akronkronfo honhom a wɔwɔ Abraham kokom a Luka 16:22-23 kyerɛkyerɛɛ ansa Kristo wusɔre a ebuee ɔpon kwan maa wɔn fi Abraham kokom kɔ ɔsoro. Bio nso, hwɛ Mateo 8:11 ne 27:52-53.
3. Gye sɛ yɛaka biribi foforo, Bible nsɛm nyinaa yɛafa aka fii Yehowa Adansefo Bible, Wiase Foforo Nkyerɛase mu.
4. Hyɛ no nsow: wɔ May 1, 2002, Ɔwɛn Aban kratafa 31, Asafo no gyei toom sɛ Hela asɛmfua “na-os a wɔde dii dwuma wɔ akenkan a ɛwɔ Adiyisɛm 7, ka fa Onyankopɔn asɔredan ɛfᾱ ɛyɛ asɔredan no mfinimfini (emu).
Tagged 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Nkwagye, Owu Akyi Asetena, Owusɔre, Ɔsoro, Paradise ne Ahenni no
← So Yehowa Adansefo Bible no, wiase foforo nkyerԐase no, yԐ nkyerԐase pa a?
Yehowa Adansefo bara mogya wɔtwe gu nipaduam →